Nitsoaka ny mpamily… : taksiborosy nitondra mpivavaka nivadika, 8 naratra | NewsMada
Nitsoaka ny mpamily… : taksiborosy nitondra mpivavaka nivadika, 8 naratra
Niala lalana ilay taksiborosy ary nivadika ambony ambany . Nandratra olona valo mahery izany ary naiditra hopitaly. Nitsoaka ilay mpamily…
Fiara mpitatitra iray, ny sasany milaza fa ligne 13 ao Mahajanga, ny hafa milaza fa taksiborosy rezionaly no nivadika tany Berivotra, afakomaly maraina. Olona valo naratra mafy vokatr’izany ary voatery naiditra hopitaly any Androva. Araka ny fanazavana azo, nitondra mpivavaka miisa 27 ity fiara ity ka tamin’ny fotoana hanaterana ireo olona ireo no niharan-doza ilay fiara. Niala lalana ilay fiara ary nivadika ambony ambany. Nosokirina tao anaty fiara mihitsy ireo naratra tamin’izany. Fantatra fa nitsoaka ilay mpamily io. Nisy tamin’ireo mahafantatra ity mpamily ity no nilaza fa nandray zava-pisotro misy alikaola izy nandritra ny fitondrana fiara.
Efa tonga teny an-toerana ny zandary nanao ny fandihadiana momba ity loza ity. Anisan’ny miverimberina loatra ny lozam-pifamoivoizana amin’ny lalam-pirenena noho ny antony maromaro. Anisan’izany ohatra ny tsy fahampian’ny torimaso eo amin’ireo mpamily. “Olan’ny mpamily manao “dona miverina” indrindra ireo taksiborosy nasionaly. Tsy maka aina sady tsy ampy ny fotoana atoriany ireo mpamily ka lasa mitera-doza avy eo”, hoy ny fanazavan’ny tompon’andraikitra kaoperativa iray.
Tsy ampy rahateo koa ny fanaraha-maso ataon’ny mpitandro filaminana amin’ireo mpamily indrindra ireo mandeha lavitra. Tsy misy ny lalàna mipetraka mandrara ny fandehanana amin’ny alina, ny fitondran’ny mpamily iray fiara tsy miato amina lalana an-kilaometra maro. Manana anjara andraikitra ny manampahefana hametraka izany, fa mety hampihena ny loza miseho lava eto amintsika.